ဖြူနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို တစ်ခါပြန်နက်စေမယ့် ကြောင်လျှာသီးရဲ့ အစွမ်း – Askstyle
ဖြူနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို တစ်ခါပြန်နက်စေမယ့် ကြောင်လျှာသီးရဲ့ အစွမ်း
ဆံပင်ဖြူကို ဆိုးဆေးမသုံးပဲ ပြန်မနက်နိုင်ဟုထင်ကြသည်။ ကြောင်လျှာသီးကို ပေါ်သောရာသီတွင်နှစ်လခန့် နေ့စဉ်ပြုပ်၍ အတို့အမြှုပ်လုပ်၍လည်းကောင်း ။
ကြော်ချက်အဖြစ်လည်းကောင်း။ မီးဖုတ်ပြီးကြက်ဥ နှင့် ရောကြော်၍လည်းကောင်း တစ်နည်း နည်းဖြင့် နေ့စဉ်စားသုံးပေးလျှင် ဆံပင်ဖြူများပြန်နက်လာစေနိုင်သည်။
ကြောင်လျှာပွင့်ခြောက်များက်ို ပေါသောရာသီတွင် ဝယ်ယူစုဆောင်းပြီးစဉ့်အိုးငယ်တွင်သိပ်၍ တစ်နှစ်လုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ။ အပွင့်ကိုရေနွေးဖျော၍သုပ်စားလျှင်လေဆက်စေသည်ဟု ရှေးလူကြီးများပြောသည်။ လေအားကောင်းစေသည်။
နားလေထွက်ခြင်း။ နားပင်းခြင်း။ အသက်ကြီး၍ နားလေးခြင်းများအတွက်ကောင်းပါသည်။ (သွေးတိုးရှိသူများကတော့ သတိထားစား၊သွေးကျဆေးသောက်ပါ)
၁။ ကြောင်လျှာသီးကို ကြက်သားနှင့်ချက်စားပါကပန်း နာ(ရင်ကြပ်)ရောဂါပျောက်သည်။
၃။ ပုဇွန်ဖြင့်ချက်စားပါက နှလုံးလေရိုက်ရောဂါ။ နှလုံး တုန်ရင်တုန်ရောဂါပျောက်ဧ။်။
၄။ ငါးသလောက်ဖြင့် ချက်စားပါက အဖောရောဂါကျစေ ၍နှလုံးရောဂါကိုသက်သာစေသည်။
၅။ ငါးမြွေတိုးနှင့်ချက်စားက ဒူလာသွေးဝမ်း။မီးယပ်သွေးဝမ်း။မြင်းသရိုက်(လိပ်ခေါင်း) ရောဂါတို့ပျောက်ကင်းစေနိင်ပါသည်။
သွေးတိုး နှင့် တည့်မတည့်မေးသူများအတွက်
၂။အအေးသွေးတိုး ဟုနှစ်မျိုးရှိသည်။ အလွယ်ပြောရလျှင် လူပိန်၊မဲများသည် အပူသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ သွက်လက်သည်။ဒေါသကြီးသည်။ လူဖြူ၊၀၊စို၊အသားအရေအေးသူများ၊ဇိမ်ခံသူများတွင် အအေးသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ အအေးသွေးတိုးသည် ဆီးချိုနှင့်တွဲဖြစ်တတ်သည်။
သွေးတိုးသည်. လေတိုးဟုလည်းယူဆသဖြင့်. (အခါးဟူသမျှ၊လေဓာတ်ကြွ) အယူအဆအရ … အခါးအရသာရှိသောအစာမှန်သမျှသွေးတိုးနိုင်သည်။ကြောင်လျှာသီးသည်ပူခါး ဖြစ်သဖြင့် အပူသွေးတိုးရှိသူများမသင့်ပါ။
မသင့်သော်လည်း ဆေးဘက်ဝင်အဖြစ်အနည်းငယ် သင့်ရုံစားနိုင်ပါသည်။ မသင်္ကာလျှင်ဆေးကြိုသောက်ထားပါ။ စာရေးသူကိုယ်တိုင်သွေးတိုးရှိပါသည်။ကြောင်လျှာပွင့်သုပ်စားပြီးခေါင်းမကြည်လျှင် ရှောက်ရည်နှင့်ပျားရည် ဖျော်သောက်ပါသည်။
အအေးသွေးတိုးနှင့်ဆီးချိုရှိသူများမှာ ကြောင်လျှာနှင့်တည့်ပါသည်။ အခါးအရသာ ဖြစ်၍ဆီးချိုသွေးချိုသမားဓာတ်စာပေးသည်ကို တွေ့ဖူးပါသည်။ ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အာဟာရ .. မျှတစွာနေထိုင် စားသောက် ကျင့်ကြံ၍ ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ။
ဆံပငျဖွူကို ဆိုးဆေးမသုံးပဲ ပွနျမနကျနိုငျဟုထငျကွသညျ။ ကွောငျလြှာသီးကို ပျေါသောရာသီတှငျနှဈလခနျ့ နစေ့ဉျပွုပျ၍ အတို့အမွှုပျလုပျ၍လညျးကောငျး ။
ကွျောခကျြအဖွဈလညျးကောငျး။ မီးဖုတျပွီးကွကျဥ နှငျ့ ရောကွျော၍လညျးကောငျး တဈနညျး နညျးဖွငျ့ နစေ့ဉျစားသုံးပေးလြှငျ ဆံပငျဖွူမြားပွနျနကျလာစနေိုငျသညျ။
ကွောငျလြှာပှငျ့ခွောကျမြားကျို ပေါသောရာသီတှငျ ဝယျယူစုဆောငျးပွီးစဉျ့အိုးငယျတှငျသိပျ၍ တဈနှဈလုံးသိမျးဆညျးထားနိုငျသညျ ။ အပှငျ့ကိုရနှေေးဖြော၍သုပျစားလြှငျလဆေကျစသေညျဟု ရှေးလူကွီးမြားပွောသညျ။ လအေားကောငျးစသေညျ။
နားလထှေကျခွငျး။ နားပငျးခွငျး။ အသကျကွီး၍ နားလေးခွငျးမြားအတှကျကောငျးပါသညျ။ (သှေးတိုးရှိသူမြားကတော့ သတိထားစား၊သှေးကဆြေးသောကျပါ)
၁။ ကွောငျလြှာသီးကို ကွကျသားနှငျ့ခကျြစားပါကပနျး နာ(ရငျကွပျ)ရောဂါပြောကျသညျ။
၂။ ငါးရံ့ ဖွငျ့ခကျြစားပါက ကာလဝမျးရောဂါပြောကျဧ။ျ အားကိုဖွဈစပွေီးအစာမကွဝေမျးပကျြပြောကျဧ။ျ။
၃။ ပုဇှနျဖွငျ့ခကျြစားပါက နှလုံးလရေိုကျရောဂါ။ နှလုံး တုနျရငျတုနျရောဂါပြောကျဧ။ျ။
၄။ ငါးသလောကျဖွငျ့ ခကျြစားပါက အဖောရောဂါကစြေ ၍နှလုံးရောဂါကိုသကျသာစသေညျ။
၅။ ငါးမွှတေိုးနှငျ့ခကျြစားက ဒူလာသှေးဝမျး။မီးယပျသှေးဝမျး။မွငျးသရိုကျ(လိပျခေါငျး) ရောဂါတို့ပြောကျကငျးစနေိငျပါသညျ။
သှေးတိုး နှငျ့ တညျ့မတညျ့မေးသူမြားအတှကျ
၂။အအေးသှေးတိုး ဟုနှဈမြိုးရှိသညျ။ အလှယျပွောရလြှငျ လူပိနျ၊မဲမြားသညျ အပူသှေးတိုးရှိတတျသညျ။ သှကျလကျသညျ။ဒေါသကွီးသညျ။ လူဖွူ၊၀၊စို၊အသားအရအေေးသူမြား၊ဇိမျခံသူမြားတှငျ အအေးသှေးတိုးရှိတတျသညျ။ အအေးသှေးတိုးသညျ ဆီးခြိုနှငျ့တှဲဖွဈတတျသညျ။
သှေးတိုးသညျ. လတေိုးဟုလညျးယူဆသဖွငျ့. (အခါးဟူသမြှ၊လဓောတျကွှ) အယူအဆအရ … အခါးအရသာရှိသောအစာမှနျသမြှသှေးတိုးနိုငျသညျ။ကွောငျလြှာသီးသညျပူခါး ဖွဈသဖွငျ့ အပူသှေးတိုးရှိသူမြားမသငျ့ပါ။
မသငျ့သျောလညျး ဆေးဘကျဝငျအဖွဈအနညျးငယျ သငျ့ရုံစားနိုငျပါသညျ။ မသင်ျကာလြှငျဆေးကွိုသောကျထားပါ။ စာရေးသူကိုယျတိုငျသှေးတိုးရှိပါသညျ။ကွောငျလြှာပှငျ့သုပျစားပွီးခေါငျးမကွညျလြှငျ ရှောကျရညျနှငျ့ပြားရညျ ဖြျောသောကျပါသညျ။
အအေးသှေးတိုးနှငျ့ဆီးခြိုရှိသူမြားမှာ ကွောငျလြှာနှငျ့တညျ့ပါသညျ။ အခါးအရသာ ဖွဈ၍ဆီးခြိုသှေးခြိုသမားဓာတျစာပေးသညျကို တှဖေူ့းပါသညျ။ ကံ၊စိတျ၊ဥတု၊အာဟာရ .. မြှတစှာနထေိုငျ စားသောကျ ကငျြ့ကွံ၍ ကနျြးမာခမျြးသာ ကွပါစေ။